Samsung ayaa raaligelin ka bixisay wargeysyada waaweyn ee Mareykanka | Wararka IPhone
Samsung ayaa raaligelin ka bixisay wargeysyada waaweyn ee Mareykanka
Dib u hagaajinta ayaa caqli leh, sida maahmaahdu u socoto. Shirkadda reer Kuuriya ee Samsung ayaan haysan waqti aad u wanaagsan bilihii la soo dhaafay, Ka dib markii la filayay in la soo saaro Samsung Galaxy Note 7, in yar oo ka mid ah warbaahintu waxay ku celcelinaysay qaraxyada joogtada ah ee aaladahaasi ay la il-daran yihiin, qaraxyada asal ahaan ka soo jeeda markii aan ahaa. ayaa amraya qalabka, laakiin had iyo jeer maahan, sida aan ku aragnay fiidiyowyada qaar ee la soo dhigay YouTube. In kasta oo la bilaabay barnaamij beddel ah, dhibaatadu wali way jirtay oo Samsung waxaa lagu qasbay inay joojiso sameynta qalabka oo ay bixiyaan barnaamij lagu beddelayo aaladda Galaxy S7 Edge ama soo celin.
Samsung waxay sameyneysaa wax kasta oo macquul ah si ay ugala soo baxdo terminal-ka suuqa, xitaa waxay bilowday inay xirto aaladaha meelaha fogfog si dadka isticmaala ee usii adeegsanaya ay u joojiyaan inay sidaas sameeyaan Iyadoo iyo in la isku dayo in la wanaajiyo muuqaalkeeda Mareykanka, madaxa Samsung ee dalka, wuxuu ku daabacay wargeysyada waaweyn ee Mareykanka, warqad raali galinaysa dhamaan isticmaaleyaashaas in ay kalsoonidooda siiyeen xarunta iyo inay ugu danbeyntii dhibaatooyin kala kulmeen.
The Wall Street Journal, New York Times iyo Washington Post waxay ahaayeen wargeysyada ay soo xushay shirkadda Kuuriya si ay u daabacdo warqaddan raalligelinta ah ee cutubyada qaarkood ay taagan yihiin:
Mabda 'muhiim u ah himiladeennu waa inaanu siino nabadgelyo iyo tayo heer sare ah. Dhawaan, waan ka gaabinay ballanqaadkaas. Sababtaas awgeed waxaan rabnaa inaan raaligelinno dhammaan adeegsadayaasha. Waxaan dib u baaraynaa dhammaan aaladaha aaladda, oo ay ku jiraan dhammaan qaybaha qalabka, softiweerka, habka wax soo saarka, iyo batteriga. Waxaan isku dayi doonaa inaan horey ugu dhaqaaqno sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan si aan isugu dayno inaan helno jawaabaha dhacdadan.
Madaxa Samsung ee Mareykanka ayaa warqadda dhameystiraya isagoo xaqiijinaya in waxa ugu muhiimsan ay tahay nabadgelyada, sabab ku qasabtay shirkadda inay qasab ku noqoto inay la baxdo dhammaan aaladaha suuqa yaalla oo ay joojiso soo saaridda moodeelka illaa ay ka helayaan dhibaatada qaraxyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung ayaa raaligelin ka bixisay wargeysyada waaweyn ee Mareykanka
Apple waxay ka bilowday barnaamij taageero ah Nederland